WordPress ကို ပြင်ကြည့်ချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
WordPress ကို ပြင်ကြည့်ချင်လို့
January 2010 edited January 2010 in CMS
အခု အနီရောင်နဲ့ဘောင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ကြည့်ချင်လို့(ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ link တွေထပ်ထည့်တာတို့...ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ link တွေဖျက်တာတို့..)
အခုဆိုကျွန်တော်က Meta ဆိုတဲ့ ထဲက အောက်ဆုံးက wordpress ဆိုတာကိုဖျက်ချင်တာ...
Wordpress က အစ်ကို ပြင်ချင်သလို့ အရမ်းကြီးစိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်လို့ မရပါဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်..။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Wordpress မှာ Css တို့ Html တို့ ပြန်လည်ပြင်ခွင့် မရှိလို့ပါပဲ..။ အစ်ကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်ချင်ရင် တော့ wordpress ကို အပြင် joomla ကို သုံးကြည့်ပါလား..joomla မှာ Css နှင့် Html
စတာတွေကို အစ်ကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်ရေးသားလို့ရပါတယ်..သုံးကြည့်ပါလား..၊
အစ်ကိုပြောတဲ့ဘောင့်ခတ်ထားတဲ့ အရာတွေက ပြင်လို့မရဘူးတော့မဟူတ်ပါဘူး..၊ ပြင်လို့ရပါတယ်..၊ပြင်လို့မရရဆိုတာက အစ်ကိုသူံးတဲ့ Themes အပေါ်မှာမူတီပါတယ်..။အချိူ့ Themes တွေက ပြင်လို့မရပါဘူး..။ဒါ ကြောင့် Themes ပြောင်းသုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...၊
အဲ့ဒါလေးသုံးကြည့်ပါလား..။ အစ်ကို ထည့်ချင်တာကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်..၊၊
ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေမလားလို့ ဝင်ပြောကြည့်တာပါ...၊ ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေဆဲမို့ အဆင်မပြေမှူများရှိရင် နားလည်ပေးကြပါ...၊
sidebar ကိုတော့ widget ကနေ ပြင်လို့ရပါတယ်။ wordpress.com က ဆိုရင်တော့ widget တွေ template တွေ ကို ပြင်လို့မရဘူး။ meta ကို ပြင်ချင်ရင် မူရင်း wordpress file ကို ပြင်မှရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် plugin ပြန်ရေးမှ ဖြစ်မှာပါ။ သူက built in widget ပါ။
To : julykglay
brother ပြောသလိုဆိုရင်... joomla ပြောင်းသုံးရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ...
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့.. wordpress မှာလဲ...သူ့ source တွေကိုပြင်လို့ရမယ်နဲ့တူတယ်ဗျ(နက်နက်နဲနဲကြီးတော့မပြင်ဖူးပါဘူး...ဟိုဟာဒီဟာလောက်တော့လျှောက်ကလိဖူးတယ်...)
To : saturngod
ကိုစေတန်ပြောတဲ့ (wordpress.com က ဆိုရင်တော့ widget တွေ template တွေ ကို ပြင်လို့မရဘူး။)ဆိုတာ ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ theme ကိုပြောတာလား..
wordprss ကို www.worpdress.org က download ချပြီး host ထိုင်တာလား.. ??? www.wordpress.com ကနေ blog လုပ်ထားတာလား...
ကျွန်တော်က http://wordpress.org ကနေ download ချပြီး localhost မှာပဲစမ်းကြည့်နေတာပါ...
yes. your theme may not support widget.